शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारमा खोई अंकुश ?
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो तह भनेको व्यवस्थापिका संसद् हो । यस तहले समयानुकूल र राष्ट्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा हुने गरी नीति नियम र कानुनहरुको निर्माण गर्ने
राज्यका हरेक नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । सुरक्षा निकाय जबसम्म चुस्त बन्दैन तबसम्म नागरिकले सुरक्षाको महसुस गर्न सक्दैनन् । प्रहरीले मात्रै चाहेर नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि
कार्यालयको काम चुस्त बनाऊ
दैनिक सयौं सवारीसधानका कागजातको काम गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ । सरुवा भएर गएका कर्मचारीको दरबन्दीमा यातायात व्यवस्था विभागले समयमा नयाँ कर्मचारी पठाउन नसक्दा सेवाग्राहीहरु मर्कामा छन् ।
प्रमको फलदायी चीन भ्रमण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १२० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको जम्बो टोलीसहित ६ दिने चीन भ्रमण गरेका छन् । चीनप्रति बढ्दो लगाव र चासो बढिरहेको सन्दर्भमा ओलीको भ्रमणले नेपालको विकासमा फड्को मार्ने अवसरका
कहिले बन्छ छुसाङ–चैले मोटरेबल पुल ?
मुस्ताङको निर्माणाधीन छुसाङ–चैले मोटरेबल पुल आयोजनाले १८ महिनामा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको पाँच वर्ष बित्यो तर पुल निर्माणको काम भने बल्ल ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । ठेक्का
कहिलेसम्म दैनिक लास भित्रिने ?
देशमा रोजगारी नपाएर लाखौँ नेपाली विदेशी भूमिका श्रम गर्न बाध्य छन् । कहिले द्वन्द्व, कहिले अराजकता, कहिले बन्द–हड्ताल त कहिले आन्दोलनबाट वाक्क भएर आफू र आफ्नो परिवारको पेट पाल्न विदेशिएका
वैकल्पिक विमानस्थल चाहियो
वार्षिक ६० लाख यात्रु व्यवस्थापन गर्ने क्षमता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छ । तर, अहिले वार्षिक ७५ लाख यात्रुको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यात्रुको चाप हरेक १५ वर्षमा दोब्बर हुने
किसान कहिलेसम्म मर्कामा ?
झापाको शरणामतीका किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभएपछि सडकमा ल्याएर पोख्दै गरेको पीडादायक दृश्य अझै सेलाएको छैन । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी मेचीनगरद्वारा सञ्चालित डेरीले दूध नकिनेपछि किसानहरू उत्पादित दूध
फुटपाथ व्यवसाय बन्द गराऊ
फुटपाथ ओगटेर गरिँदै आएको व्यापारलाई निषेध गर्ने अभियान काठमाडौं महानगरपालिकाले शुरु गरे पनि यसको प्रभाव खासै देखिएको छैन । काठमाडौंको व्यस्त शहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारण बटुवाले खेप्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो सास्ती भनेकै
मानव तस्करलाई कारबाही गर
वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका घटना बढ्दै गएको छ । अमेरिका, युरोपियन मुलुक, मलेसियालगायत खाडी मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगारीका लागि भन्दै नेपाली कामदार ठगिँदै आएको खबर सञ्चारमाध्यमहरुमा आउने क्रम जारी छ । ठगीका
विद्युत् चोरलाई नछाड
विद्युत् चोरी गर्नु राष्ट्रिय अपराध हो । तर, यस्तो कार्य संगठितरुपमै चल्दै आए पनि राज्यले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । विद्युत् वितरण लाइनबाट हुकिङ गर्ने, मिटर नराखी विद्युत् प्रयोग गर्ने,
ट्राफिक व्यवस्थापन जरुरी
राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यका यति बेला अस्तव्यस्त देखिन थालेको छ । बिहान–बेलुकाको समयमा निकै जाम रहने बजार दिउँसोको समयमा जामसँगै सवारी चापका कारण अस्तव्यस्त अवस्थामा देखिने गरेको छ । सवारी
विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता बिहीबार बेलुकादेखि सुरु भएको छ । हरेक चार÷चार वर्षमा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता यसपटक रुसका ११ सहरका १२ वटा रंगशालामा सुरु भएको छ । निकै भव्यताका साथ
विकासमा नाममा भ्रष्टाचार
स्थानीय सरकारले आफ्ना कामहरु थालनी गरिरहेको देखिएको छ । तीव्र विकासको चाहना भएका आम नागरिकहरुले विकासप्रतिको अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेकोले समस्या देखिएको छ भने गाउँ वा नगरको विकासका लागि चुनिएका
खै गाउँ गाउँमा बैंक
शहरी क्षेत्रका जनताले मात्र बैंकिङ सुविधाको उपयोग गर्न पाएका छन् । नेपालमा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतले मात्र बैंकिङ सुविधा पाएको तथ्याङ्क छ । बढी अवसर र लाभका हिसावले बैंकहरु बढी
सर्वसाधारणलाई कहिलेसम्म यस्तो सास्ती
महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरमा अहिले बेहाल अबस्था छ । चारैतिर खाल्डाखुल्डी र कच्ची बाटो हिलाम्मे बनेको छ । अहिले सम्म कुनै पिच नभएकाले यहाँ यस्तो दुर्दशा भएको छ । जलेश्वरको शंकरचोक,
अब आयआर्जन गर्ने शीप सिकाउ
आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना सुरु हुनै लाग्दासबै जिल्लाका स्थानिय तहको व्यस्तता बढेको छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि टोल तथा वडा स्तरबाट योजनाको छनौट गर्ने कामदेखी चलिरहेको आर्थिक बर्षको बजेटलाई
बजार अनुगमन बढाउ
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आव ०७५/७६ को बजेटमार्फत जनआकांक्षा सम्बोधन गरेको दाबी गरिरहँदा बजारमा भने अन्तःशुल्क बढेको बहानामा व्यापारीहरुले मनोमानीरुपमा मूल्यवृद्धि गरेपछि उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । व्यापारीहरुले उपभोग्य सामग्रीमा
कहिले बन्छन ४० आधुनिक शहर
सरकारले अघि सारेका ४० आधुनिक शहर तथा व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्ने योजनामा कुनै काम भएको देखीएको छैन । आर्थिक वर्ष २०६७/७८ देखि मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० वटा शहरको छनोट गरी
विकासमा दाङ झन पछाडि
दाङको टरी गाउंमा विमानस्थलमा फेरी उडान हुन छाडेको छ । केही समय अघि शुरु भएको हवाई यात्राले खुसी भएका दंगाली फेरी निराश हुनुपरेको छ । अहिले विमानस्थल गौचरन बनेको छ